Google: Subdomain ma ọ bụ nchekwa nchekwa maka ọtụtụ asụsụ | Martech Zone
Google: Subdomain ma ọ bụ obere nchekwa maka asụsụ ọtụtụ
Monday, August 20, 2012 Na Mọnde, Nọmba 24, 2020 Douglas Karr
N'ime njikwa Google Search, enwere ọtụtụ nhọrọ maka njikwa akụkụ querystring. Otu n'ime nhọrọ ndị a bụ ịme ngosi asụsụ.
Ruo ugbu a, echere m na nke a ga-abụ ụzọ kachasị mma iji nye nkwado asụsụ dị iche iche na weebụsaịtị ka Google wee nwee ike ịmata peeji ndị mepụtara maka asụsụ. O yiri ka m na-ezighi ezi, n'agbanyeghị, mgbe anyị nyochachara SEO, Nikhil Raj, chọtara obere akụkụ a na vidiyo Google na nso nso a na parameters.
Omume kachasị mma bụ itinye asụsụ na subdirectory ma ọ bụ folda nchekwa kama oke oke iji nyere igwe na-achọ ihe aka ịghọta usoro saịtị.
At 11:35 na vidiyo n'okpuru, Maile Ohye na-eme nkwanye (ọ bụghị ihe a chọrọ).
N'iburu nke ahụ n'uche, ọ bụrụ na ị nwere saịtị WordPress, lelee WPML - Mkpokọta Multi-asụsụ WordPress mwekota na ihe ndị a:
Kwuru ntụgharị asụsụ
Njikwa ntụgharị asụsụ ọkọlọtọ
Akpaka ID ịgbanwe
Nchọgharị asụsụ ihe nchọgharị
Isiokwu na plugins ọnọdụ
Klout Score Reinvented… na-amasị m ya!
Kedu ka ndị ahịa si eji Social Media?
Aug 20, 2012 na 2:05 PM
Daalụ Doug maka ịkpọtụrụ! Nhọrọ kachasị mma maka ebe nrụọrụ weebụ na-asụ asụsụ dị iche iche bụ iji mkpado canonical na njikọ njikọ aha ọzọ